Bruce Lee မှစာပိုဒ်တို ၂၀ နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း 20 | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Bruce Lee ဟာမင်းသူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမင်းရဲ့စိတ်ကအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးအာရုံစိုက်လာတဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။
Bruce Lee သည်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရန်စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူကအကောင်းဆုံးပါ။
1) အခြေအနေများနှင့်အတူငရဲရန်, ငါအခွင့်အလမ်းများကိုယုံကြည်».
သင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေသည်သင်၏ဘ ၀ အပေါ်သြဇာသက်ရောက်သည်။ သင်မွေးဖွားသည့်တိုင်းပြည်၊ သင်၏မိဘများနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ရန်သည်သင်၏ဘဝအပေါ်ထားရှိသောသင်၏သဘောထားဖြစ်သည်။
2) "ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဘဝအတွက်ဆုတောင်းပေးပါ။ ခက်ခဲတဲ့ဘဝကိုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ခွန်အားပေးပါ".
ဘဝသည်အခက်အခဲများစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေသော်လည်း၎င်း၏လှပမှုသည်သင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်နှင့်ကျော်လွှားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားကြီး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာလွန်နိုင်သည်။
အလင်းရှိရန်အမှောင်ထုရှိရမည်၊ ဝမ်းနည်းခြင်းမရှိဘဲပျော်ရွှင်မှုမရှိနိုင်ပါ။ အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှသာဘဝဟာအေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်မှာပါ။
တက္ကသိုလ်တွင်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းပြုခြင်းကိုအဆုံးသတ်ရန်သည်အောင်မြင်မှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူသော်လည်းပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်ရှိသောကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ် (ပိုချစ်ရပြီးပိုကောင်းသောလစာ) ရှိသောအလုပ်များရှိလိမ့်မည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်ရည်.
5) ကျရှုံးမှုကိုမကြောက်ပါနှင့်။ ရာဇ ၀ တ်မှုသည်ကျရှုံးမှုမဟုတ်ပါ။ အောင်မြင်မှုရရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ပင်ကျရှုံးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။.
ပျက်ကွက်သည်ဟစ်စပန်းနစ်ကမ္ဘာတွင်အလွန်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ရှုံးနိမ့်မှုသည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်နိုင်ရန်ဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအပြုသဘော connotation ရှိပါတယ်။ ကျရှုံးမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်သဘောထားကိုပြောင်းလဲသင့်သည်။
7) အသုံးဝင်သောအရာများကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပါ၊ အသုံးမ ၀ င်သောအရာများကိုငြင်းပယ်ပါ၊.
၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်လိုသူအတွက်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောအလုပ်ပုံစံကိုကူးယူခြင်းသည်မဆိုးပါ။ အမှန်မှာ၊ NLP (Neuro-Linguistic Programming) သည်အောင်မြင်သောလူများသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်များကိုမော်ဒယ်လ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်သောအရာတစ်ခုကိုပံ့ပိုးပေးရသည်မှာမှန်ပါသည်။ ပုံတူတစ်ခုဖန်တီးရန်လုံလောက်မှုမရှိ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်သို့မဟုတ်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုယူလာပါ။
8) “ ယုံကြည်ခြင်းသည်လူ၏စိတ်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းနှင့်ယုံကြည်နိုင်မှုကိုရရှိစေသည်။.
ယုံကြည်ခြင်း၏စွမ်းအားသည်အစားထိုးမရနိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ်ခုကိုသစ္စာရှိစွာယုံကြည်ခြင်းသည်ထိုအရာကိုနောက်ဆုံး၌ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရာတစ်ခုလုံး (ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများနှင့်လုပ်ရပ်များ) ကိုထိုအရာ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ထားခဲ့သည်။ အောင်မြင်မှုသည်လုံးဝမပျောက်မပျက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဒါကအနှစ်သာရပဲ သတိ, ဒီမှာနှင့်ယခုသတိထားပါ။ ၎င်းသည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအနုတ်လက္ခဏာအတွေးများ၏စိတ်ကိုငြိမ်သက်စေရန်အလွန်ထိရောက်သောတရားအားထုတ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဤသည်ကိုအောင်မြင်သောလူများအကြားတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သူတို့ကိုအဘို့အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ သူတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိခြင်းကြောင့်သူတို့စိတ်ထဲထားရှိသမျှကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သော့ချက်မှာသူတို့ကိုယ်၌ရှိသည့်မျက်စိကန်းသောယုံကြည်ခြင်း၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါကဘုရားကျောင်းလိုအမှန်တရားပဲ။ ပျော်ရွှင်ရန်အစွမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်၌ဖြစ်သည်။ ငါတို့အတွက်ပြင်ပမှာဘယ်အရာကမှငါတို့ကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်သလိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိသင့်ဘူး။ အာဏာသည်မိမိ၌တည်၏။
အတွေး၏စွမ်းအားသည်အရာအားလုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကကျွန်ုပ်တို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရပုံကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါဟာသိမြင် - အပြုအမူကုထုံး၏အခြေခံသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလောကတွင်ကျွန်ုပ်အလွန်လေးစားမိသည့်လူတစ် ဦး ၏ဟောပြောချက်နှင့်အလွန်ကိုက်ညီသည်။ ဆာဂျီယိုဖာနန်ဒက်ဇ။ သူကပြောရုံသာမက၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့် "The Secret" စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အရာ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
ငါရှင်းပြဖို့အငြင်းပွားဖွယ် Sergio ဖာနန်ဒို၏လိုင်းဆီသို့ပိုပြီးအမှီ။ သင်တစ်ခုခုရှိလိုပါကသင်၌ရှိပြီးသားကဲ့သို့စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်၌၎င်းရှိပြီးသားကဲ့သို့ခံစားမိပြီးသင်၏အတွေးများသည်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်သောယင်းကိုရယူခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လိမ့်မည်။
14) “ အပြောင်းအလဲကအတွင်းပိုင်းကနေအပြင်ကိုသွားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားကိုဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြင်ပအခြေအနေများကိုပြောင်းလဲခြင်းမပြုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စတင်သည်».
ထာဝရ။ ငါပြီးသားပါဝါကိုယျ့ကိုယျကိုတည်ရှိသည်ကြောင်းအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ငါတို့အတွက်ပြင်ပမှာဘာမှမရှိတော့ဘူး။
15) မသေနိုင်သောသော့ချက်မှာ ဦး စွာသတိရသင့်သည့်ဘဝကိုရှင်သန်ရန်ဖြစ်သည်.
မကြာသေးခင်ကတစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုနည်းနည်းစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့တစ်ခုခုပြောတာကိုငါကြားခဲ့ရတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ အတွင်းမှာမင်းတို့လုပ်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးရဲ့မင်းရဲ့လက်ရာတွေ၊ မင်းရဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊ မင်းဘာမှမကျန်တော့ဘူးဆိုတာစဉ်းစားပါ။ သင့်ကိုသတိရဖို့တစ်ယောက်ယောက်တောင်မှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ သင်၏အနှစ်သာရကိုမေ့လျော့ခြင်းသည်လုံးဝဖြစ်လိမ့်မည်။
16) "ဆရာကောင်းတစ် ဦး ကသူ၏ကျောင်းသားများကိုသူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှအကာအကွယ်ပေးသည်".
ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ဟာလူတွေကိုပညာပေးရမယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသိပညာပေးရုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ သူ၏အလုပ်သည်သူ၏ကျောင်းသားများအတွင်း၌သူတို့၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနှင့်ကမ္ဘာနှင့်သက်ဆိုင်သောအလုပ်များမှစတင်ရမည်။
လူသိများတဲ့နှစ်သိမ့်မှုဇုန်မှထွက်ခွာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောအရာအတွက်ဖြေရှင်းပါကမကျေနပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စွန့်စားသည်။ သင့်ကိုလူတစ် ဦး အနေနှင့်တိုးတက်စေရန်နှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်၌နေထိုင်သူများကိုပိုမိုပျော်ရွှင်စေမည့်ရည်မှန်းချက်အသစ်များကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေပါ။
ဒါကငါပဲအထက်ပါရေးသားခဲ့သည်နှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများကိုတန်ဖိုးထားပါ။ သင်၏ဘ ၀ သည် ပို၍ သာယာပါလိမ့်မည်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘဝခက်ခဲစေတယ်။ အရာများ၏အနှစ်သာရကိုရှာဖွေ၊ သင်၏ဘဝကိုရိုးရှင်းအောင်ကြိုးစားပါ။
မင်းရဲ့အတွေးတွေပေါ်မူတည်ပြီးဝါကျနံပါတ် ၁၂ မှာဒီအကြောင်းငါပြောထားပြီးပြီ၊ မင်းအဲဒီလိုခံစားရလိမ့်မယ်။ မွေးမြူရေးနှင့်အပျက်သဘောအတွေးများကိုထိန်းချုပ်ရန်သော့ချက်တစ်ခုမှာတရားအားထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင့်စိတ်ကိုတိတ်ဆိတ်စေရန်နေ့စဉ်အနည်းဆုံး ၅ မိနစ်အချိန်ယူပါ။
ဒီမှာရေးထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုသိချင်ပါတယ် ဒါကိုသင်သဘောတူသလား သင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အထူးတစ်ခုခုရှိပါသလား။ သင်သဘောမတူသောအရာတစ်ခုခုရှိပါသလား။ သင့်မှတ်ချက်ပေးပါ ငါသည်သင်တို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုဖတ်ရှုဖို့ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » Bruce Lee မှကိုးကားချက် ၂၀ နှင့် ၄ င်းတို့အပေါ်ထင်ဟပ်မှု ၂၀
ကြီးစွာသော bruc lee ၏ Ntos ။ ကျနော်တို့ကဒီပုံပြင်များနှင့်အပြုသဘောအတွေးများနှင့်အတူထွန်းလင်းဆက်လက်မျှော်လင့်,
Sebas G. Mouret မှတူးမြောင်းအပေါ်အထီးကျန်မှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု
Takahashi Junko မှ "နှစ် ၁၀၀ အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ဂျပန်နည်းလမ်း"